Wararka Maanta: Talaado, Jun 26, 2012-Madaxda DKMG Soomaaliya oo Hamblayo ku Aaddan sannad-guuradii 26-Juun u diray Shacabka Soomaaliyeed
Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dalka dibadda uga maqan ayaa wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu hamblayeeyay guul iyo horumar, isagoo sheegay in sannad-guuradaan ay kusoo beegantay xilli ay wadahadallo u billowdeen Soomaaliya iyo Somaliland.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isaguna u diray hamblayo taas la mid ah shacabka Soomaaliyeed, isagoo si weyn uga hadlay wadahadallada u billowday Soomaaliya iyo Somaliland, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay inay noqdaan kuwo mira-dhala.
"Waxaan rajeynayaa in wadahadallada billowday ay noqdaan kuwo u adeega danta iyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waxaana rumeysanahay in isfahamku uu ku jiro wadahadalka," ayuu yiri Shariif Xasan.
Afhayeenka baarlamaanku wuxuu hadalkiisa ku daray in heshiis walba oo la gaaro uu ku jiro horumarka dalka, isagoo xusay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay iscafiyaan ayna ka fikiraan danta dalkooda.
"Wixii dhaliyay in Somaliland ay ku dhawaaqdo goosasho waxay ahayd cadaalad-darro, waa in cadaaladda lasoo celiyom, Allena la baryo," ayuu guddoomiyuhu ku daray hadalkiisa.
Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo isaguna ka hadlay 52-guurada kasoo wareegtay markii ay xoreebeen gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa hamblayo u diray shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.
"Runtii sannad-guuradan waxay kusoo beegmaysaa xilli ay Soomaaliya ka guurayso colaad una guurayso nabad, taasina waa farxad. Waxaana dadka Soomaaliyeed ku bogaadinayaa inay dib u soo laabanayso Qaranimada Soomaaliya," ayuu yiri C/weli Maxamed.
Madaxda Soomaalida ayaa waxay wadahadallada billowday ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland ku tilmaameen kuwo waddada u xaari kara in midnimada Soomaaliya ay dib u soo laabato.